Cimilada: Gameover ZeuS Botnet
The Gameover ZeuS botnet wuxuu ku shaqeynayaa Microsoft OS waxaana la helay sanadkii 2007. Waxa ay keentay dhibaatooyin kala duwan ilaa iyo hadda, khadkana waxay xadeen $ 70 million. Waxaa jira dhowr calaamadood iyo calaamado muujinaya ka dib markii loo yaqaan 'Gameover ZeuS botnet infiltration'. Mishiinada la jabsaday waxay bilaabayaan inay fuliyaan tilmaamahooda. Haddii qalabkaagu uusan si fiican u shaqeyn oo aad ka walwalsan tahay amaanka xogtaada, fursadaha waa in kombuyuutarku uu qayb ka yahay shabakadda shabakada ee botnet iyo waqtigani waa wanaajinta waxqabadka guud. Arrimaha ku saabsan baaskiilada Gameover ZeuS waxay muujinayaan heerar yaryar iyo kuwo waaweyn - grain bins. Jason Adler, khabiirka Khabiirka , wuxuu sharaxayaa in ay jiraan noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'Gameover ZeuS botnet' ee maamulayaasha shabakada, laakiin kuwa soo socda ayaa ah kuwa ugu fiican:
Botnet lagu ogaanayo malabku
Xirfadlayaasha amniga ee caanka ah iyo caanka ah waxay tixgelinayaan abuurista malabaha waxayna u yeeraan wax fiican. Mararka qaarkood baaskiilada Gameover ZeuS ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa oo qayb ka mid ah qalabkaaga si fudud. Tusaale ahaan, haddii aad isticmaasho Suricata, oo ah nidaamka ogaanshaha bilaashka ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad liis gareyso liistada Gameover ZeuS botnets lagu yaqaan nidaamkaaga. Nasiib darro, ma'aha suurtagal maadaama liiska liiska buuxa ay sameeyeen kumbuyuutarrada iyo isku daygaada inaad isku xirto internetka ama adeegga C & C caddeeyo inuu yahay mid aan faa'iido lahayn
Botnet lagu ogaado meesha ugu dambeysa
Goobta loo yaqaan 'Gameover ZeuS botnet' ee ku salaysan martigelinta waxay ka bilaabantaa xakameynta fayruska waxaana lagu sameeyaa dhowr sawir oo ku saabsan bogagga macmiilaha. Waa ammaan in la yiraahdo farsamooyinka fayraska fayraska badanaa badiyaa waxay ku guul daraystaan ​​helitaanka infekshannada, sidaa darteed maamuluhu waa inuu eegaa dhibaatooyin dheeraad ah. Ogaanshaha botnet ee meelaha ugu dambeeya waa suurtogal marka aad ka hortagto rakibida rootkitada qalabkaaga, ha ku dhejin xayeysiiska banner aan la filaynin ama daaqadaha soo dega, iyo inaad iska ilaaliso xayeysiinta HTTPS. Dabcan, haddii server-kaaga caadiga ah ee DNS la bedelay, waxay noqon doontaa muujin cad oo ah in hacker uu wax ka qabtay nidaamkaaga iyo inaad qaaddo tallaabooyin degdeg ah.
Botnet lagu ogaado shabakad
Xiriirka kubadda cagta ee Gameover ZeuS ee ku salaysan shabakadu way adag tahay in la ogaado. Mid ka mid ah siyaabaha lagu ogaanayo loona soconayo waxay ku xiran tahay wadahadalka hadalka. Gaadiidka IRC waxaa loo diraa sir ah, taas oo micnaheedu yahay in hacker lagu ogaaday ereyada muhiimka ah ee goobtaada iyo isaga / iyadu dib u isticmaalay dhaqdhaqaaq xumo. Haddii ay si kala duwan u soo baxaan si lama filaan ah isla markaana isla markaaba lagu dhufto boggaga dibedda, taasi waa calaamad cad oo ah in weerarada weerarka ee DDOS-ka ay ka bilowdeen qalabkaaga ama nidaamka kombiyuutarka. Isla mar ahaantaana, socodka gaadiidka dadweynaha ayaa laga yaabaa inuu dhibaato kuu keeno. Warka wacan waa in botnets ay u badan tahay in la dhammeeyo maalmaha soo socda.
Waqtigan xaadirka ah, khabiiradu waxay diiradda saarayaan xalalka furan ee laga helo sida Snort, iyo bixinta amniga isku dhafan sida AlienVault, si ay ula tacaalaan botnets. Waxaa muhiim ah in la ogaado asalka shabakadda botnet, iyo mahadnaqa Ilaah, khabiirada IT-ga ayaa suurtageliyay suurtagalnimada qalab iyo barnaamijyo kala duwan. Marka ay falanqeeyaan nooca iyo saameynta baaskiilada, waxay xaddidi karaan oo ka saari karaan biknoolajiyada gudaha iyo kuwa caalamiga ahba. Celcelis ahaan, kumanaan ka mid ah boorsooyinka loo yaqaan 'Gameover ZeuS' ayaa mar hore laga saaray, khabiirkuna waxa uu sii wadi doonaa shaqadaas. Taas macnaheedu waa inaan awoodi karno inaan ka takhalusno mar kasta mustaqbalka.